यही ठाउँ हो, गोर्खालीसँग अंग्रेज सैनिक कायल भएको - म्यागेजिन - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
यही ठाउँ हो, गोर्खालीसँग अंग्रेज सैनिक कायल भएको
फणिन्द्र दाहाल देहरादून, भारत, ८ पुस
नालापानीको खलंगा किल्ला दुई सय वर्षअघिको ऐतिहासिक युद्धस्थल हो। युद्धको साक्षी रहेको खलंगा किल्ला संरक्षणको अभावमा जिर्ण बन्दै गएको छ। सो किल्ला आज संरक्षणको प्रतिक्षा गरिरहेको छ।
नालापानी किल्लाको संरक्षणको जिम्मेवारी पुरातत्व विभागलाई दिइएको छ।
खलंगा भारतको उत्तराखण्ड राज्यको राजधानी देहरादून सहरबाट करिब ५ सय किलोमिटर टाढा पर्दछ। खलंगा किल्लामा युद्ध हुँदा अंग्रेजहरुले नेपाली सैनिकलाई हराएका थिए, तर अंगे्रजहरुले जितेपछि नेपाली सैनिकको वीरताबाट उनीहरु कायल भएका थिए।
खलंगा किल्लामा तत्कालीन समयसँग जोडिएको स्मारक आज पनि अस्तित्वमा छ। स्मारक जीर्ण हुँदै गएकोमा यहाँका नेपाली मूलका स्थानीयवासीहरु चिन्तित छन्। स्थानीयवासीहरु यो क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मेवारी भारत सरकारको भएको बताउँछन्। उनीहरु आफ्नो पुर्खासँग जोडिएको ऐतिहासिक स्थलको अवलोकन गर्न नेपाली अधिकारीहरुपनि आउनुपर्छ भन्ने चाहान्छन्।
यहाँ अंग्रेज सैनिकको विजय र नेपाली सैनिकको वीरताको इतिहास जोडिएको स्मारक छ। नेपाली सैनिकहरु पराजित भएपनि अंग्रेजहरुले नेपाली सैनिकको बहादुरीको प्रसंशा गरेका थिए। दुई वर्षअघि यो क्षेत्रमा भिषण लडाइँ भएको थियो। तर आज यो क्षेत्र शान्त छ। आज यो क्षेत्रमा गाडीको हल्लामात्रै छ। इतिहासकारहरु सन् १८१४ को अक्टुबरमा भएको नालापानी युद्धमा गोला बारुदद्वारा सुसज्जित करिब ३५ सय अंग्रेज सैनिकहरुले गोर्खाली सैनिकविरुद्ध हमला गरेको बताउँछन्। उक्त हमलामा जनरल रोयल रोलो जिलेस्पी सहित ८०० सय अंग्रेज सैनिकहरुको मृत्यु भएको थियो।
भनिन्छ, सो युद्धमा महिला र बालबालिकासहित ६सय नेपाली सैनिक मात्र थिए। ती ६ सय नेपाली सैनिकहरुले नालापानीको पहाडमा खुकुरी, तिर, धनुषवाण र ढुङ्गाको साहाराले तीन पटकसम्म अंग्रेजको प्रयास विफल बनाइदिएका थिए।
त्यसपछि अंग्रेजहरुले खलंगाको किल्लामा पानीको मुहान बन्द गरिदिएको नेपाली इतिहासकारहरुले बताएका छन्।
खलंगामा रहेको स्मारक, जहाँ बलभद्रको नाम गलत लेखिएको छ।
पिउने पानी बन्द भएपछि नेपाली फौजका कमाण्डर बलभद्र कुँवरले नालापानी छाड्ने घोषणा गरे। उनी ७०जना सैनिक लिएर बाहिर निस्किए।
युद्धपछि तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले उक्त स्थानमा जनरल जिलेस्पी र बलभद्र कुँवरको सम्झनामा दुई वटा स्मारक बनाए। जहाँ बलभद्र कुँवर र उनको सैनिकलाई ‘वीर दुश्मन’ नामद्वारा सम्बोधन गरिएको छ।
बलभद्र विकास समितिका उपाध्यक्ष तथा भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त कर्नेल सी.बी. थापा बताउँछन्, ‘बलभद्र कुँवरको बहादुरीका कारण मानिसहरुले गोरखा सैनिकलाई ‘वीर’ माने। आज जति पनि नेपाली पल्टन छन्, उनीहरु गोर्खा टोपी लगाउँछन्। त्यो टोपी उही बलभद्रको देन हो।’
उनी भन्छन्, ‘अंगे्रजहरुले गोर्खालीहरुको त्यही बहादुरी देखेर सन् १८१५ मा गोरखा रेजिमेन्टको स्थापना गरे। त्यसबेलाको देनकै कारण नेपालीहरु आजपनि गोर्खा टोपी र खुकुरी भिरेर हिँड्छन्।’
बलभद्रको बारेमा अंग्रेजहरुले लेखेको शिलालेख
देहरादूनको स्मारकमा बलभद्र कुँवरको स्थानमा ‘बलभद्र थापा’ उल्लेख छ। नेपाली इतिहासकारले ‘कुँवर’ हुनुपर्नेमा ‘थापा’ लेख्नु गल्ती भएको बताएका छन्।
‘नालापानीको नायक’ नामक पुस्तकका लेखक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नेपाली इतिहास संस्कृति र पुरातत्व विभागका प्रमुख धनबहादुर कुँवर बताउँछन्, ‘बलभद्र कुँवरका पिता चन्द्रवीर कुँवर सेनापति थिए। चन्द्रवीरको निधनपछि बलभद्रका हजुरबुवा अमर सिंह थापाले दरबारमा चिठी लेखि उनलाई फौजको कप्तानी दिन भनेका थिए। त्यसपछि उनलाई १८१३ मा नालापानीको जिम्मेवारी दिइयो।’
इतिहासकार कुँवरका अनुसार नालापानीको लडाइँपछि १८२४ मा अफ्गानिस्तानका राजा रणजीत सिंहको फौजको पक्षमा लड्दालड्दै बलभद्र कुँवर मारिए।
कयौं मानिसहरुले अझै उनलाई आफ्नो देश छाडेर अफगानिस्तानको लागि लड्ने ‘भाडाको सिपाही’ भन्दछन्।
तर बलभद्र कुँवरलाई आजपनि देहरादुन सहित भारतका कयौं स्थानमा नेपाली भाषी समुदायका मानिसहरुले आफ्नो गर्व र पहिचानका रुपमा लिने गरेका छन्।
नेपाली सेनाले तयार पारेको नालापानी लडाइँको चित्र
देहरादून सहरको नजिकै रहेको खलंगा स्मारक भारतीय पुरातत्व विभागको संरक्षण्मा रहेको छ। स्मारक स्थलभन्दा अलि पर नालापानी पहाडमा रहेको युद्ध मैदान आजपनि संरक्षणको अभावमा रहेको छ।
तत्कालीन युद्ध मैदान वन क्षेत्र हो। तर त्यहाँ देहरादुनका स्थानीयवासीहरुले बलभद्रको सम्मानमा एक युद्ध स्मारकको निर्माण गरेका छन्। त्यसको पनि उचित संरक्षणको अभाव रहेको छ।
युद्ध स्मारक जिर्ण अवस्थामा रहेको छ। केही वर्ष अघि स्मारक जिर्णोद्धारका लागि भारत सरकारले ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। स्थानीयवासीले भने सो रकम ‘ट्रेकिङ रुट’को लागि दिएको बताएका छन्। उनीहरु ऐतिहासिक विरासत बोकेको स्थलको संरक्षण हुने पर्ने बताउँछन्।
बलभद्र कुंवर वीर विभूतिका रुपमा हुलाक टिकटमा
समितिका उपाध्यक्ष कर्णेल सी.बी. थापा उक्त स्थानलाई पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्न बेलायत सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।
नेपाली सेनाको इतिहास लेख्ने सहायक रथी प्रेम सिंह बस्नेत अंग्रेजसँग भएको नालीपानी युद्धमा बलभद्र कुँवरले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको बताउँछन्। बलभद्र कुँवरले अग्लो पहाडमा काठ र ढुङ्गाबाट किल्ला बनाएको उनी बताउँछन्।
नालापानीको किल्ला बनाउँन बलभद्र कुँवरले गोरखा सैनिकहरु, उनका श्रीमतीहरु र बालबालिकाहरुको समेत सहयोग लिएर अहोरात्र खटेर सो किल्ला मजबुत बनाएको उनी बताउँछन्।
नालापानी किल्लाको पुरानो नक्सा
अंग्रेजहरुले अचानक हमला गर्दा किल्ला १२ फिट अग्लो बनेको थियो। सो ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षणका लागि यहाँ रहने नेपाली भाषी नागरिकहरुले आफ्नो पुर्खाको इतिहास बचाउँन नेपाली अधिकारीहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
स्थानीयवासीले निर्माण गरेको द्वार
आजसम्म पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, झलनाथ खनाल, र पूर्व सेनापति छत्रमान सिंह गुरुङले यो क्षेत्रको अवलोकन गरिसकेका छन्।
प्रकाशित ८ पुस २०७३, शुक्रबार | 2016-12-23 12:54:24
फणिन्द्र दाहालबाट थप